Soo Iibso Kuwa La Soco ee Liiska Ciyaarta ee Spotify - SoNuker
SoNuker had iyo jeer waxay soo gudbin doontaa wax ka badan inta aad iibsatay
Tirinta Raacayaasha boggaaga ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee booqdayaasha boggaaga ay eegaan. Waxay ku sababi kartaa iyaga inay isla markaa go'aansadaan isla markaasna ay ku raacaan adiga ama ay eegaan astaantaada. Daraasaduhu waxay muujiyeen in markaad yeelato Dad badan oo Raaciyayaal ah, Jecel, Aragtiyo & Faallooyin aad u badan tahay inaad hesho Taageerayaal dabiici ah oo cusub. Iyadoo Spotify ay si joogto ah u cusbooneysiineyso / u beddeleyso algorithms-ka ay sii adkaaneyso in la dhiso koontadaada.
Markaad iibsaneysid Spotify Playlistayaasha ka bixiya bixiye sumcad leh sida nagaaga waxay siinaysaa Spotify-kaaga muuqaalka tartanka u baahan yahay in la arko oo uu yeesho isbeddel sare oo ah abuurista saameyn fayras ah ama dhisidda kobcin dhaqameed.
Adeegyadayadu waa 100% ammaan ah in la isticmaalo. Si ka duwan adeeg-bixiyeyaasha badan, kama codsaneyno ama u baahanno lambarka sirta ah ee warbaahinta bulshada. Sidaa daraadeed, ma xakamaynayno xisaabtaada ama kugula talin doonin wax kasta oo ay tahay inaanu sameyn. Adeegyada aan bixino waxaa la baaray waqtiyo badan oo aan sii wadeyno cusbooneysiinta iyo horumarinta codsiyada warbaahinta bulshada si loo xaqiijiyo natiijooyinka tayada ugu sareysa iyo kuwa ugu wanaagsan.
SoNuker.com waxay ku bixisaa adeegga ugu sarreeya uguna hal-abuurka badan ee adeegyada Suuqgeynta Bulsho ee Warbaahinta Suuqa.
100 kuwa raacsan ($ 20) 250 kuwa raacsan ($ 35) 500 kuwa raacsan ($ 60) 1000 kuwa raacsan ($ 100) 2500 kuwa raacsan ($ 180) 5000 kuwa raacsan ($ 300) 10000 kuwa raacsan ($ 500) 15000 kuwa raacsan ($ 700)
1000 Ciyaar ($ 45) 2000 Ciyaar ($ 80) 5000 Ciyaar ($ 150) 10000 Ciyaar ($ 275) 20000 Ciyaar ($ 500) 50000 Ciyaar ($ 900)
100 kuwa raacsan ($ 15) 250 kuwa raacsan ($ 25) 500 kuwa raacsan ($ 45) 1000 kuwa raacsan ($ 80) 2500 kuwa raacsan ($ 160) 5000 kuwa raacsan ($ 300) 10000 kuwa raacsan ($ 550)